Magweta eInternet epakati muNetherlands - Law & More
Iwe unoda here gweta mukati mekambani yako kwenguva pfupi? Ita shuwa kuti kambani yako ine yakaringana yemutemo rutsigiro uye kudana mune chetimire gweta kubva Law & More pakarepo. Icho chikonzero chekuvhiya gweta yenguva chakasiyana kune imwe neimwe kambani. Izvo zvingave kuti iwe uine shanduko mukati mekambani yako, mushandi anorwara, iwe unoda kubata pabasa rekunyanyisa kana kuti iwe unoda kuve nechokwadi chekuti chirongwa chiri kufamba zvakanaka.
URI KUTI UTSHURE MUNOGADZIRIRA KUSVIRA TEMPORARY?
Iwe unoda here gweta mukati mekambani yako kwenguva pfupi? Ita shuwa kuti kambani yako ine yakaringana yemutemo rutsigiro uye kudana mune chetimire gweta kubva Law & More pakarepo. Icho chikonzero chekuvhiya gweta yenguva chakasiyana kune imwe neimwe kambani. Izvo zvingave kuti iwe uine shanduko mukati mekambani yako, mushandi anorwara, iwe unoda kubata pabasa rekunyanyisa kana kuti iwe unoda kuve nechokwadi chekuti chirongwa chiri kufamba zvakanaka. Mhando dzose dzematambudziko akasiyana siyana dzinogona kugadziriswa nekuhaya gweta rechimurenga kubva Law & More. Aya matambudziko anogona kukonzera kuti kambani yako irege kuita kune yayo yepamusoro uye iyo inogona kuve nemhedzisiro yakaipa. Chinangwa chikuru chekuhaya gweta repakati ndechekusimbisa mhando yekambani yako. Izvi zvinogoneka nekuti iye kana iye anopa nyowani uye nyowani kutarisa kukambani yako. Sezvo gweta richigona zvakare kuita sarudzo dzakazvimirira zviri nyore, haufanire kumirira kwenguva yakareba kuti uite sarudzo.
Kuhaya gweta repamberi
We at Law & More tenda zvakakosha kuti pane chekuita nekudzoka kana iwe uchihaya gweta revatongi. Ndosaka isu tine magweta ane makore echiitiko ane ruzivo rwakakosha rwegweta pamutemo, kuti iwe ugone kuendesa ivo nekukurumidza. Semuenzaniso, wave kuda kutanga chirongwa, uri kuronga kugadzirisazve here kana kuti uri kutora nguva yekuzorora usipo? Wobva wadana mune imwe ye Law & Moremagweta epamberi.
taura chirongwa chakajeka chekuita.
Inobatanidzwa uye inogona kunzwira tsitsi
nedambudziko remutengi ”
Paunoshandira gweta rekambani yenguva pfupi, zvakakosha kuti gweta iri rigone kutumirwa nekukurumidza. We at Law & More edza kuona kuti magweta edu epamberi eekambani anogona kuisirwa pabasa ipfupi nekambani yako, kuitira kuti iwe ugone kuramba uchishanda pasina kukanganisa. Magweta a Law & More kukubatsira mukuita kwezuva nezuva matanho epamutemo, asi zvakare uchigona kuita basa rinotarisirwa negweta nyanzvi. Uyezve, nyanzvi dzedu dzinogona kushanda pamwe chete nedhipatimendi rezvemitemo uye nevamwe vako vanachipangamazano uye vekunze vezano, asi ivo vanogonawo kutora mapurojekiti makuru mukati mekambani yako uye nekupa mazano akazvimirira. Iwe unoda here gweta repamberi? Ipapo ndokumbirawo kubvunza magweta ku Law & More.
Nei uchihaya gweta revatongi kubva Law & More?
Magweta epamberi a Law & More atove padanho rekuziva
Usasarira shure pabasa uye kuhaya gweta repakati
Magweta edu epakatiwo ane ruzivo rwegweta
Pakarepo kuisirwa pasi
Kubata pabasa rekunyanyisa sezvo magweta edu epamberi anogona kuiswa ipapo nekukurumidza